ကြောင်ကြီးအိ မွေးဏေ့ဆုတောင်း BD | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြောင်ကြီးအိ မွေးဏေ့ဆုတောင်း BD
ကြောင်ကြီးအိ မွေးဏေ့ဆုတောင်း BD
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 14, 2015 in Creative Writing, Society & Lifestyle |7comments
အနော်ဦးကြောင်ကြီး မွေးဏေ့မှာ ကိုကို အူးအူး ဓေါ်ဓေါ် မမတို့အပေါ် ပျစ်မှားဂဲ့မိသမြ ဝံခြတောင်းပန် ရှဉ့်ကျီးခိုးပါလျဲ့ခမျာ… အမေစု ပြောတဲ့ မေတ္တာတလျား လူဒိုင်းထားနိုင်ကြပါစေ…။
အမြင်မှံ ရသွားသော ကြောင်ကြီးအိ ရှဉ့်ခိုးတောင်းပန်ဟန်
ကြောင်ဝါ ကနေ ကြောင်ဖြူ ဖြစ်သွားပဟေ့။
ထိပ်မှာ ကွက်ဝါ နေသေးလို့ သာ မှတ်မိတော့တယ်။ lol:-))))
The Third-Anglo Burmese War begin 130 years ago today.
The Burma Expeditionary Force of Sir Harry Prendergast, mustered outside Fort St George, Madras, set sail from Prome, crossing the border at Thayetmyo, defeating Burmese forces after fierce resistance at Minhla, and taking the surrender of king Thibaw’s envoys near Ava. Mandalay fell the day after the surrender, on 28 November 1885.
Photos are of (1) the aftermath of the Battle of Minhla; the royal surrender at Ava by the Kyaukmyaung Atwinwun; guards at Mandalay palace; entry into the palace by Chief Commissioner Sir Charles Bernard.
There is no doubt that the colonial rule that followed was an absolute disaster for Burma, as I have tried to argue in my books, the echoes of which remain today.
(Photographs from the British Library)
အာ့ နဲ့ ကြောင်ကြောင် မွေးနေ့ နဲ့ ဘာများ ဆိုင် လို့ တုန်း။
တခြားနိုင်ငံ တွေမှာ မလုပ်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးလဲ လုပ်ကြည့်ချင်တယ်။
ဥပမာ- တစ်ချို့တွေက မေတ္တာကို အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ ကောင်းပြီ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ မဖြစ်နိုင်ရင်
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးလား ဆိုတာ။
အဲဒီလို စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူဘူး။
တမူးထူးပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်။
(အောင်နိုင်ရေး အတွက် ကူညီသည့် အနုပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ – နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်)
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD တောင်ပြို ကမ်းပြို အနိုင်ရမယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဦးကြောင်ရဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခန့်မှန်းချက်ကို အင်မတန်မှပဲ လေးစားပါတယ်…။
ခန့်မှန်းချက်က ဒေါ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ် ခရီးစဉ်တွေ နောက်ပိုင်းမှ ထွက်လာတာ ဆိုရင်တောင် ဒီလောက်ထူးခြားမှာ မဟုတ်ပါဘူး …။ အဲဒီအချိန်က ထင်သာမြင်သာ ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းရ လွယ်လာပြီလေ …။
ဦးကြောင် ပြောခဲ့တဲ့ အချိန်က… ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ… လွှတ်တော်ထဲကြိုးပမ်းမှု… အောင်မြင်မှု မရတဲ့အချိန်…။ ပြည်သူတွေက ဒေါ်စုအပေါ် မျှော်လင့် အားထားချက်တွေ လျော့မလိုဖြစ်နေချိန်မှာ ဦးကြောင်က တောင်ပြို ကမ်းပြို နိုင်မယ်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးကြောင်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ခန့်မှန်းချက်ကို လေးစားပါကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောပါရစေ…။
ဒေါ်စုအပေါ် ဦးကြောင်ရဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေကို ကြိုက်တာလဲရှိ… မကြိုက်တာလဲရှိ…။ လက်ခံတာလဲရှိ… လက်မခံတာလဲရှိ…။ သို့ပေမယ့်… မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စောင့်ကြည့်နေသူ တစ်ဦးထံက ဒီလို ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ခန့်မှန်းချက်က… အခြားသူတွေတော့မသိ…။ ကိုယ့်အတွက်တော့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ အထိုက်အလျောက် လျော့ပါးသွားစေတာ အမှန်ပါ…။
နောင်ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံအရေး အပြုသဘော ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေကို ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ အသိပေး တောင်းဆိုပါတယ်…။
ပျင်းရိဖွယ် တပင်တိုင်အကပဲ ကြည့်ခွင့်ရနေရာကနေ… ယှဉ်ပြိုင်မှု နောက်ဆုံးရက်တွေ နီးလာချိန်ကစပြီး.. ပြိုင်ပွဲပြီးချိန်ထိ.. ကသွားတဲ့ ကကွက်က… ဗောဓိတစ်ထောင် ကကွက်ဖြစ်နေမှန်း ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် တွေ့လိုက်ရတာလေးပါ…။
ကြောင်သက် အရဆို ၁၃ နှစ်လောက် ရှိရောပေါ့
ကကြောင်က တစ်နှစ် နှစ်သားကျတာလားးးး မွေးနေ့က ခီနခီနဆိုတော့လေ